कति डिजिटल मार्केटिंग एसईओ मा निर्भर गर्दछ?
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि एसईओले कसरी डिजिटल मार्केटिंग च्यानललाई असर गर्छ? अझै स्पष्ट जवाफमा पुगिसकेको छैन? कुनै चिन्ता छैन. आज, हामी तपाईलाई विस्तारको बारेमा वर्णन गर्दछौं कि कति वेब मार्केटिंगले खोज इन्जीन अनुकूलनमा निर्भर गर्दछ.
तपाईले पहिले नै थाहा पाउनु भएको छ, एसईओ पछिल्लो केहि वर्षहरुमा धेरै परिवर्तन भएको छ. यो विकसित भयो र 190 दशक को मध्यमा धेरै लोकप्रिय थिए कि अपर्याप्त र पुरानो वेश्या खोजशब्द प्रविधिहरु भन्दा धेरै अगाडी गए।. 2005 सम्म, पनि साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरूले एसईओ निर्यात किराँत गर्न थाले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि उनीहरूले ट्राफिक र बिक्री बढाउन मद्दत गर्नेछन्.
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि 2017 मा एसईओ अझै पनि अनलाइन कारोबार को प्रचार मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ. खोजी इञ्जिन अनुकूलन रणनीतिहरूले सही तरिकाले कार्यान्वयन गरेमा उच्च-मान परिणाम ल्याउँछ. त्यसोभए, हामी यस विषयमा गहिराइ जान्छौं र हेर्नुहोस् कि कति डिजिटल एसईओ मा डिजिटल मार्केटिंग हुन्छ.
वेब मार्केटिंग टीमहरु मा बेसिक एसईओ को सहयोग
यिनी दिनों, अनलाइन अनलाइनहरु र वेब डिजाईजर्स को अधिकांश उनको डिजिटल रणनीति मा प्राथमिक एसईओ रणनीति शामिल हो।. यो हुन्छ किनकी आजकल एसईओ को दृष्टिकोण अधिक समग्र र पहिले पहिले भन्दा एकीकृत. यसले सफलतापूर्वक अन्य मार्केटिङ विषयहरूको साथ एक दिन-आधारित आधारमा सहयोग गर्दछ. यहाँ केहि केही चीजहरू छन्:
सामग्री रणनीति: सामग्री एक राजा हो, एक मूल्यवान एसईओ सम्पत्ति, एक शक्तिशाली उपकरण - जुन जुन मनपर्छ त्यसलाई कल गर्नुहोस्. यो एक अयोग्य तथ्य हो कि एसईओ को बजेट को सामाग्री निर्माण मा निर्भर गर्दछ. एसईओ संग एक सफल सामग्री रणनीति को लागी चाँडै केवल न केवल रूपांतरणहरु लाई पनि ब्रान्ड विश्वसनीयता को बढावा दिन सक्छ.
सामाजिक सञ्जाल मार्केटिंग: यो एसईओ लाभहरु को पूरा स्पेक्ट्रम को प्राप्त गर्न को लागि तपाईंको एसईओ रणनीति संग आफ्नो सोशल मीडिया कार्यक्रम को संयोजन को लागि अत्यधिक सिफारिश गरिन्छ. सामाजिक शेयर तपाईंको संसाधनमा प्राकृतिक ब्याकलिङ्कहरू ल्याउनको लागि उत्तम छन्. अधिक के छ, तिनीहरूले संकेत गर्दछ कि तपाईंको सामग्री रणनीति राम्रो काम गर्दैछ वा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ कि छैन.
सशुल्क खोज: Google एनालिटिक्स र एसईओ मिश्रण गरेर, तपाई महँगी कीवर्डहरू टाँस्न सक्नुहुनेछ, यसरी कार्बनिक ट्राफिक. सशुल्क खोज टोलीले केहि कारकहरू अनुकूलन गरेर एसईओ टोलीहरूको साथ सहयोग गर्न सक्दछ, जसमा कीवर्ड योजनाहरू, ल्यान्डिंग पृष्ठहरू, अन्तरक्रियात्मक सामग्री रणनीति र लाइन सहित.
सार्वजनिक सम्बन्ध: अनलाइन एसोसिएशन प्रबंधन तपाईंको एसईओ रणनीति मा अर्को महत्वपूर्ण कदम हो. PR टीमहरूले एसईओसँग सहयोग गरेर अत्यधिक लाभ उठाउन सक्छन्: ब्यान्डको उल्लेखहरूले दुवैलाई फाइदा लिन सक्दछन्: अनलाइन उपस्थिति र खोज दृश्यता.
रूपान्तरण: रूपान्तरित रणनीतिहरु र एसईओ को संयोजन गर्न जैविक परिणाम बढा सकते हो. यदि तपाईं सही सामग्री भ्रमणको साथ उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवसँग मेल गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सन्तुष्ट प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा ल्याउनुहुनेछ. तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई अझ राम्रो बुझ्नको लागि ताप नक्शा पढ्न विचार गर्नुहोस्. साथै, नियमित रूपमा तपाईंको UI परीक्षण गर्नुहोस्.
वेबसाइट विकासकर्ता: एसईओ विकासकर्ताहरूको साथ एक टोलीमा काम गर्न आवश्यक छ. वेबसाइट गति अप्टिमाइजेसन, साथै मोबाइल खोजको अनुकूलन, प्राविधिक लेखा परीक्षाहरू र ज्ञान साझेदारीहरू महत्त्वपूर्ण छन्, र जाभास्क्रिप्ट टाढा जाँदैछ. नयाँ प्रविधिहरू गम्भीर पार्नुहोस् र कसरी उनीहरूलाई सही कार्यान्वयन गर्ने भनेर सिक्नुहोस्.
तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग को भित्र धेरै विषयों संग सहयोग.
एसईओ एक विकासशील कुरा हो: हरेक दिन हामी नयाँ खोज अवसरों को देख्छौं. तपाइँका परिवर्तनहरूसँग टाढा गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो चीजहरू तपाईंको डिजिटल टोलीसँग स्पष्ट र संक्षिप्त हुनुपर्छ. तिनीहरूलाई के गरिरहनु भयो कि तपाई के गरिरहनु भएको छ भने तपाईको अर्को चरणको बारेमा बताउनुहोस्, तपाइँको एसईओ विचारहरु डिजिटल विशेषज्ञहरु संग साझा गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् एक महिनामा के हुन्छ Source . सायद, तपाईं यस्तो सहयोगको परिणाम चाहानुहुन्छ!